Dacwada Badda ee Soomaaliya iyo Warbixinta Yusuf Garaad – Goobjoog News
Dacwada Badda ee Soomaaliya iyo Warbixinta Yusuf Garaad
Maanta waxaan fursad u helay in aan la fariisto khubrada farsamo iyo qaanuun ee Soomaaliya ku matalaya dacwadda ka dhanka ah Kenya ee ku saabsan soohdinta badda ee labada dal.
Aad ayay ugu mashquulsanaayeen dhammaystirka iyo hubinta dhammaystirka gal Dacwadeedka Soomaaliya oo Isniinta si rasmi ah loogu gudbin doono Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda.
Waxayse iga aqbaleen in ay iiga jawaabaan su’aalo kooban:
Waxaan ogeyn in Dacwadda badda la gudbiyay sannadkii 2014. Maxaa keenay in Isniinta la gudbinayo mar kale?
Dacwadda markii ugu horreysay waxay Soomaaliya geysay Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda 28 August 2014. Sida nidaamka Maxkamaddu uu qabo waxay ahayd Dacwad kooban oo ah codsi muujinaya waxa laga cabanayo iyo sababta.
Ka dibna markii ay Maxkamaddu ka soo baaraan degtay in kiiskaasi yahay mid ay geli karto ayay isugu yeertay labada dhinac; kan dacwoonaya oo ah Soomaaliya iyo kan iska daafacaya dacwadda oo ah Kenya.
15kii Oktoobar 2014 ayaa Soomaaliya iyo Kenya ay isku hor fariisteen Maxkamadda Caalamiga ah ee Hague si go’aan looga gaaro jadwalka iyo qaabka dacwadda.
Dood ay Kenya damacday in dib loo dhigo dacwadda ama wakhtigeedu daba dheeraado iyo Soomaaliya oo isku dayday in wakhtigu koobnaado oo go’aanku dhakhso u soo baxo ayay Maxkamaddu dhegeysatay labada dhinac ka dibna ay iyadu go’aank ku gaartay sidan:
In Soomaaliya ay soo gudbiso dacwad dhammaystiran oo wadata dokumenti markhaati ah oo muujinaya in badda lagu muransan yahay ay Soomaaliya leedahay – 13ka July 2015. Kiiska oo dhammaystiran.
Kenya iyada waxaa loo qabtay 27ka May 2016 in ay soo gudbiso wixii ay isku difaaceyso.
Muxuu le’eg yahay bedka badda lagu muransan yahay?
Qiyaastii waa 142,000 Km oo laba jibbaaran.
Dacwaddan, Yaa Soomaaliya matalaya?
Qareenno iyo khubaro isugu jira Soomaali, Mareykan, Faransiis iyo Ingiriis oo heer caalami ah ayna ka mid yihiin shakhsiyaad iyo sharikado kuwa adduunka ugu wanaagsan kiisaska noocaan ah.
Ma taqaanniin cidda mataleysa Kenya?
Go’aanka yaa gaaraya?
Garsoorayaasha Maxakamadda Caalamiga ah ee Caddaaladdu waa 15 ay ku jiraan Guddoomiye iyo Guddoomiye ku xigeen. Iyaga ayaa wadajir uga fariisanaya go’aanna ka gaaraya.
Sida xeerka Maxkamaddu uu qabo, haddii Garsoorayaasha Maxkamadda uu ka mid yahay qof u dhashay labada dal ee is dacweynaya midkood, waxaa dalka kale loo oggol yahay in Garsoore dalkeeda ka socda uu dacwaddaas marka la qaadayo oo keliya uu la fariisto Garsoorayaasha Maxkamadda.
Sidaa darteed, maaddaama Guddoomiye ku xigeenka Maxkamaddu uu yahay Garsoore Soomaali ah, waxaa Kenya u bannaan in ay Gasoore Kenyan ah ay u soo dirsato in uu la fariisto Garsoorayaasha Maxkamadda marka ay kiiskan go’aan ka gaarayaan.
Goorma ayaa la fili karaa go’aanku in uu soo baxo?
Inta ka horreysa sharikadaha shidaalka ka baaraya badda ee Kenya u baaraya Maxkamaddu ma ka joojineysaa?
Maya. Inkasta oo ay noo furnayd in aan arrintaa dacwad ka furno, haddana ma aynaan weydiisan. Sababta oo ah waxay noqon lahayd in laba loo kala qaado dacwooyinka. Oo marka hore la qaado dacwad ku saabsan joojinta. Inta aan loo gelin xadeynta badda.
Waxaan u aragnay in taasi ay sii daahineyso wakhtiga ay baddeennu nagu soo wareegeyso.
Laakiin intaa ugama aynaan harin. Waxaan toos ula xiriirnay Sharikadaha shidaalka ka baaraya badda. Digniin ayaan siinnay. Qaar badani way ka baxeen. Kuwa ku harayna waxay Dowladda Soomaaliyeed ku soo rogtay ganaax maalinle ah.
Marka ay Maxkamddu xukun riddo, ma laga qaadan karaa racfaan?
Maya. Go’aanka Maxkamaddan waa in sidiisa loogu dhaqmaa waana kama dambeys.
Maxay la eg tahay rajada in Soomaaliya ay ku guuleysato in ay Baddeeda si sharci ah dib ugula soo noqoto?
Aad iyo aad ayay u sarreysaa. Marka la eego go’aammadii hadda ka hor laga gaaray kiisaska noocaan ah iyo weliba caddeeymaha farsamo iyo kuwa qaanuun ee la hayo, aad iyo aad ayaan ugu rajo weyn nahay in aan ku guuleysanno dacwaddan.
Afeef: Warbixintan waa mid u gaar ah qoraaga ku saxiixan
Askari Ka Tirsan Dowladda Oo Degmada Afgooye Ku Dilay Haweeney Uur Leh
DEGDEG: Qaraxyo Gilgilay Hoteelo ku yaalo Magaalada Muqdishu
Faahfaahino Kasoo Baxaya Weeraradii Lagu Qaaday Hoteelada Siyaad iyo Weheliye